Ogaden News Agency (ONA) – Waan Ogayn Hasa Ahaatee Qoraalada ddspost ee JO Waa Markhaati (evidence)
Waan Ogayn Hasa Ahaatee Qoraalada ddspost ee JO Waa Markhaati (evidence)
Posted by ONA Admin	/ February 1, 2015
Dambiyada ay Itobiya, gaar ahaan kooxda TPLF ee xukunka qabsaday ay ka galeen shacabka Somaliyeed ee Ogadenya ma’aha wax lasoo koobi karo. Waxaana hubaal ah inay u baahan tahay in juhdi la galiyo, waqti dheerna uu qaadan doono dabagalka dambiyada laga galay shacabkeena. Cabdi iley iyo kooxda la socota ee Jeel Ogaden dadka shacabka ah ku ciqaaba, waxba kama duwana eyda loo carbiyo in lagu ugaadhsado ama booliska u isticmaalo dambi baadhista. Inkastoo diinta islaamka iyo shareecada aanay ka cafiyin qofka dil iyo dhibaato u gaysta qofka kale oo lagu amray sidaa.
Maqaalada naxdinta leh ee ddspost ay kasoo wariyeen Jeel Ogaden waa mid uurkutaalo leh oo qofka damiirkiisa wax u dhimaya, ayna adagtahay inuu rumaysto qof bani-aadam ah inuu siyaabahaa ula dhaqmo qof kaloo aadana ah. Waxaa sidoo kale ah arin uu aad uga muruganayo qofka u dhashay dalkaa ee akhriya maqaaladan ama lasocda waxa ka dhacaya JO ee hadana arkaya culumo Somaliyeed oo loo hanweynaa oo waliba deegaankaa u dhashay oo intay tagaan Ogadenya oo Jigjiga lagu soo dhaweeyo, markay kasoo noqdaan aan sooba qaadin arimaha noocan ah oy hubaal tahay in loo sheegay ama ay si dhib yarba ku ogaan kareen. Waxaana kasii daran marka ay cusbo sii marmariyaan jareexada ku taala damiirka shacabka Ogadenya oy markhaati beenaale ay kaga hadlaan maxfalada caamka ah. Arintanna waxay ka mid tahay un taariikhda qormaysa ee umadda Somaliyeed ee Ogadenya.
Maqaalka 1aad ee ddspot ay arimahaa ka qoreen waxaa ka mid ah cutubkan; Waxaan anigu usootaagnaa dhalinyaro 2 ahayd oo gacmaha iskaga xidhnayd isla markaana lugaha ka sil-siladaysnaa oo lakeenay Cusbitaalka Kaaraamardha, Dhalinyaradaas oo runtii aanan garankarin waxa ay ku xidhnaayeen balse aan kaliya tilmaamikaro in ay ahayeen Qalfoof socda iyo inay nolosha ku ureen, silica kamuuqdayna ay u dhaamilahayd in nafta ladhaafiyo. Waxaan aad uga argagaxay markii midkamida wiilashii ay damceen inay qabtaan garabka dhalinyaro kalkaaliyayaal caafimaad ahaa, balse ay uu cabaaday isagoo leh “AAA, AX ALLAWALAAL GARABKU WUU IDAMQANAYAAYE AAN GURGUURTEE IDAAYA.
Maqaalkaa oo dhamaystiran Riix; DHACDOOYINKA XANUUNKA BADAN EE JEEL OGAADEEN Ka DHACA.
Maqaalka 2aad ee isla arimtan wax ka qoray waxaa ka mid ahaa ereyada tiiraanyada leh; Nin ka koodhka xidhan ee diifta iyo dhibku ka muuqdo waa nin dhalin yaro ah, waxaa laga soo qabtay isagoo ku jira goob cibaado, waa nin reer ahaan ah sheekhaas. Waxaa la geeyey jeel ogaadeen, wuxuu ku xidhnaa mudo ka badan shan sano, maalintii la xidhay baa ugu danbaysay cid u timaado oo u sheegta sababta uu uxidhan yahay, waxaa la soo gudboonaatay jidh dil badan iyo gaajo, waxaa intaas dheerayd in reerkooda lacag iyo aduun badan laga qaaday balse isaga ayna gaadhayn, wuxuu u soo joogay dad hortiisa lagu jidh dilayo, waxa la dilay kii bidix ka seexanayey, kii midig ka seexanayey, aakhirkii xanuun maskaxda ah ayuu qaaday, wuxuu waayey miyir kiisi iyo maankiiba. Hadana isagoo xanuunsanaya ayuu dawar sadaa. Markuu xanuunsaday ayaa waxaa faylkiisa lagu xidhay wuu isa saxay, sidaas baana lagu soo daayey. Waana ninkaas aad hada aragtaan.
Maqaalkaa oo dhamaystirana Riix; Jeel ogaadeen iyo cuqubooyinkii ka dhacay (Dadkii jeelka ku washay Qaarka mida)
Ujeedada uu gumaysiga ugu samaynayo xasuuqa iyo gaboodfalka shacabka Ogadenya waa mid lawada ogsoon yahay. Inay ogoladaan gunnimada oo cagta askariga Itobiyaanka ah la ogolaysiiyo, oo hankii iyo islaweynadii umadda Somaliyeed ee muslimka ah ay caanka ku ahayd ay halkaa ku dhamaato. Hasa ahaatee wax magaradka uu Cabdi iley soo urursaday ee shacabka masaakiinta ah gacantooda lagu laynayo ee u haysta inay guul ku gaarayaan arintaa, sow ma ogsoona in jeermiska iyo cayayaanka ku dhex nool qofka haduu qofkaasu u dhinto dartood in godka lagula aaso oo aanay ka dambaynin.
Halganka wuu socon wuuna guulaysan, qof walbana meesha uu kaga jiro ayay taariikhda u xusi doontaa.